Global Voices teny Malagasy » Shina: Fitsarana an-tendrony sy fanilikilihana ataon’ny Han amin’ny Uyghur · Global Voices teny Malagasy » Print
Shina: Fitsarana an-tendrony sy fanilikilihana ataon'ny Han amin'ny Uyghur
Voadika ny 07 Aogositra 2009 15:38 GMT 1	 · Mpanoratra Winglok Hung Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Shina, Fanabeazana, Foko sy Fiaviana, Politika
Mihoatra ny iray volana izay no nisian'ny rotaka tany Xinjiang tamin'ny 5 jolay  ary mbola manameloka ny Tandrefana sy ny Rebiya Kadeer  ho nampiroborobo ny hetsiky ny mpisintaka tany Xinjiang ny ankamaroan'ny mpiserasera shinoa. Misy ihany na izany aza ny bitsika toy izay hita ato amin'ny BBS of people.com ato  mipongatra etsy sy eroa, izay mihevitra fa noho ny tsindry hazo lena nandritra ny fotoana maharitra no nahatonga iny rotaka tany Urumqi iny:
Tsy nisy ny feo nivoaka rehefa voarahodrahona hatrany hatrany, manjary ny herisetra no vahaolana farany!
Ny fanavakavahan'ny foko Han (maro an'isa amin'ny Shinoa) manoloana ny Uyghurs hatramin'ny fotoana ela nialoha ny rotaka tamin'ny volana jolay no nahatonga iny toe-javatra iny. Raha jerena ny dinika an-tserasera hita ao amin'ny Tianya forum , dia maro ny fitsarana an-tendrony ataon'ny Han amin'ny Uyghurs hitanao ao. Iray amin'izany ity :
Hitantara aminareo ny zavatra niainako manokana aho. Nandritra ny taona vitsivitsy nianarako tao amin'ny anjerimanontolo tany Urumqi dia nisy fandaharana malaza tao amin'ny CCTV mitondra ny lohateny hoe “Special 6+1”. Iray tamin'izany fandaharana izany dia niresaka tamina olon'i Xinjiang iray ny mpanentana (naotin'ny mpandika teny: maro amin'ny Han Shinoa no miantso ny Uyghur ho olon'i Xinjiang) ny amin'izay mba faniriany. Nahagaga fa ny hany valinteniny dia hoe ny hipetraka mandritra ny andro vitsivitsy monja amina trano fandraisam-bahiny any Beijing. Vaka ny mpanentana ka nanontany izay antony. Nohazavain'ilay nasaina ary ny niainany tamin'ny diany nankany nitondra ny zanany lahy nitady hopitaly tsara hitsaboana nandritra ny taompolo 1990. Tamin'izany diany izany dia tsy nisy nety nandray azy ny trano fandraisam-bahiny rehetra tany Beijing satria olon'i Xinjiang ry zareo.
Niaina toe-javatra tahaka izany ihany koa i Feom-bahoaka tamin'ny 2006:
Tany Beijing aho nandritra ny noely 2006. Na dia tsy nisy soratra hoe “No Uyghurs” (tsy idiran'ny Uyghurs) aza ny varavarana dia sasatra aho voasavan'ny mpiambina hatrany.
Ankoatra ny adim-piainana isan'andro dia maro no leon'ny fitsarana an-tendron'ny Hans sy ny tsy fifankahazoan-kevitra amin'izy ireo. Nitabataba tao amin'ny Tania forum i Mijery ny rahona sy ny rano misosa  fa olon'i Xinjiang hanehoany ny fahatezerany amin'ireny fitsarana an-tendrony ireny,
Te-hihoraka aho fa Uyghur!…. Misy mpangalatra any Xinjiang, fa na aiza na aiza misy mpangalatra avokoa. Sa izany no milaza fa avy any Xinjiang ny mpangalatra rehetra? Mora tokoa manondro ny hita ho avy amin'ny minorité ho mpangalatra. Avy eo dia lazaina fa olon'i Xingjiang ny mpangalatra rehetra. Raha ny marina dia maro ny toerana any amin'ny Tanibe no notsidihako ka hitako fa mbola azo itokisana lavitra kokoa any Xinjiang.
Na dia te-hanitsy ny politika ho amin'ny fiarovana ny fiteny sy ny kolontsaina Uyghur aza ny fitondrana foibe, dia maro ny Shinoa Han no mandà ny hanohana. Ohatra vao haingana amin'izany ny fikasan'ny fitondrana foibe  hampakatra avo roa heny ny fanampiana (USD 121 million) ny garabola mampiasa teny roa any Xinjiang. Maro hatrany ny mitaraina amina politikam-piangarana tahaka izao:
Tezitra momba ity fanapahan-kevitra politika ity i Mpandainga tsy manana tetika :
Na dia manana garabola aza any any amin'ny faritra hafa, nahoana no any no iasan'ny governemanta?
Namaly i  Shenqike :
Ahazoan-dronono ny tomanin-jaza! Tsy misy zaza mitomany any amin'ny faritra hafa!
Nanampy i  Xwni ,
Zaza maditra mahazo vatomamy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/08/07/2928/
 rotaka tany Xinjiang tamin'ny 5 jolay: http://www.chinadaily.com.cn/china/2009xinjiangriot/index.html
 toy izay hita ato amin'ny BBS of people.com ato: http://bbs1.people.com.cn/postDetail.do?view=2&pageNo=1&treeView=0&id=93562601&boardId=1
 Feom-bahoaka : http://www.tianya.cn/publicforum/content/free/1/1529992.shtml
 Mijery ny rahona sy ny rano misosa: http://www.tianya.cn/publicforum/content/free/1/1587743.shtml
 fikasan'ny fitondrana foibe: http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2009-08/03/content_8507417.htm
 Mpandainga tsy manana tetika: http://www.tianya.cn/publicforum/content/free/1/1641278.shtml
 Winglok Hung: https://globalvoicesonline.org/author/winglok-hung/